Jaakada Ski funaanada ah ee xeel dheer oo dab-damis oo tayo sare leh leh iyo warshado lagu kalsoonaan karo iyo soosaarado | Ruisheng
Kabaha jaakadaha jilicsan ee dab-damiska oo tayo sare leh oo la isku halleyn karo
Jaakada barafka ragga waxaa loogu talagalay jawi aad u ba'an waxaana si xarago leh loogu tolay dhar fidsan waxaana lagu buuxiyay waxyaabo jilicsan. Waxay leeyihiin gogosha jilicsan, gacmo dhaadheer oo leh shaati dabacsan, silsilado hawo ah oo gacanta hoostiisa ah, goonno baraf ah oo laga saari karo, jeebka garka iyo jeebadaha biyaha ka celiya laba jeelood oo go'an. Hawlaha farsamada ee leh xorriyadda dhaqdhaqaaqa ugu badan sida xusullada foorarka
Aqbal Astaanta Macaamiisha OEM
Waxyaabaha Polyester / Customization-ka, Waxyaabaha la codsaday
Kooxda Da'da Dadka waaweyn
Qaabka Jaakadaha, jaakadaha haweenka ee dabaysha
Anti-UV, Neefsan kara, DEGDEG qalalan, Dabayl la'aan
1.Professional daahan biyuhu, dahaarka dhogorta iyo dareen jilicsan oo raaxo leh, iyo sidoo kale dhar waara oo ka samaysan 2400 fiber polyester waxay hubin kartaa kuleylka ugu fiican.
Jaakada barafka aan biyuhu ka shaqeyn karin waxay ku hoos shaqeyn kartaa madaxa cadaadiska oo ka badan 10000 mm. Markaad bannaanka joogtid, jirkaaga ka dhig mid qalalan oo raaxo leh waqti kasta, oo waad iska caabin kartaa cimilada roobka ama barafka leh.
1) 2 jeebabka gacanta lagu siibay oo dabool leh (baasaboor ama kaarka lagu keydiyo).
2) Labo jeeb oo gudaha ah, hal jeebeel warbaahin gudaha ah iyo hal jeebka jeebka.
3) Waxaa jira jeebka balastarka gacanta bidix si loogu keydiyo dahabkaaga (siddooyin, hilqado, silsilado, iwm.), Aalado ama kaararka barafka intaadan dhaqaaqin.
4) Waxaa ku jira jaakad dhegaha furaha iyo qalabka taageeraya gudaha jaakadda.
4. Jaakada barafka ee biyaha celiya ayaa si fudud ula qabsan kara jawiga xun, sida barafka, roobka ama barafka. Waxay kufiicantahay barafka dhaadheer, barafka lagu riixo, barafka, fuulitaanka, socodka, safarka, iyo jaakada oo leh daboolka lakala bixi karo sidoo kale waxay kufiicantahay isboortiga banaanka kale ama munaasabadaha kaladuwan.
Hore: Dharka Rag-Xagaaga ah ee dharka lagu xirto ee Pajamas tayo sare leh 100% Boqolkiiba Ragga raaxada ee Ragga Hurdada Leh
Xiga: Raga tayada sare leh ee ragga SoftshellJacket Bannaanka
Mens tayo sare leh jaakad si ay u ahaato diiran oo qaro weyn